အိန္ဒြာ: ဧရာဝတီရဲ့ ကဗျာတွေ
All above compositions are beautiful in aesthetic view rather than technical.
Artist is good sense in naturalistic IQ and all aspects.
Once Poet Innwa U Ko Lay said to Ko Min Ko Naing "We are emotional, practical thins was done by activists and politician like as you".
A remarkable note is :
့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဒွဲဘူက " မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တကယ် ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်ထဲက လူထုက စိုးရိမ်နေတာ အမှန်ပါပဲ။......
ကျွန်မတို့ ကချင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့လည်း ဒီအင်မတန် ရှားပါးတဲ့ မြစ်တစ်ခုဆုံတာကို ဒီအတိုင်းပဲ ထာဝရ စီးဆင်းနေချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ဒီဟာကို တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ လူထုအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့က တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုကို ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ နားလည်ပါတယ်" (EMG News 15 Sept 2011)
Great Collection... Thanks :)
ပိတောက်ပွင့်သစ် ... တာဝန်ကျေပါတယ်
ဧရာဝတီကဗျာတွေ .. ဧရာဝတီကဗျာတွေ .. နောက်ပြီး
ဧရာဝတီကိုချစ်တဲ့ ကဗျာဆရာတွေ ... ကျွန်တော်နဲ့ သိတဲ့ ကဗျာဆရာတွေရော .. ကျွန်တော်နဲ့ မသိတဲ့ ကဗျာဆရာတွေရော ... ဧရာဝတီကိုချစ်တဲ့ ကဗျာဆရာတွေ ... ပြည်သူရဲ့နှလုံးခုန်သံကို နားလည်တဲ့ ကဗျာဆရာတွေ ... ဘယ်သူမှ မခိုင်းပေမယ့် .. ကျွန်တော်လည်း ဧရာဝတီ ကဗျာတစ်ပုဒ်လောက် ရေးကြည့်ဖို့ တွေးမိသွားပါတယ်။
ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကောင်းလိုက်တာ..